मोदी र प्रचण्डको समाजवाद : हेमन्तप्रकाश वली – eratokhabar
२०७९, १२ जेठ बिहीबार
मोदी र प्रचण्डको समाजवाद : हेमन्तप्रकाश वली
ई-रातो खबर २०७३, ३१ भदौ शुक्रबार ०४:२५ September 16, 2016 2082 Views
हेमन्त प्रकाश वली
स्थाइ समिति सदस्य
महान् एंगेल्सले वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको थियो । स्टालिनले त्यसलाई सर्वहारा समाजवादको रुपमा व्याख्या गर्नुभयो । समाजवादको लोकप्रियताका कारण हिटलर, नरेन्द्र मोदी र वि.पी.ले पनि समाजवाद आफ्नो आदर्श भनेका थिए, छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समाजवाद एंगेल्सले भनेको समाजवाद हो कि मोदीको ? माओवादी केन्द्रको बैठकमा विचार र राजनीतिको विषयमा छलफल हुँदैन । बैठक शुरु हुँदानहुँदै फाट्टफुट्ट उठ्दै हिड्दै गर्छन् । कारमा चढेर जान्छन् . कारमा चढेर निस्केका उनीहरु साँझ परेपछि कता जान्छन् ? थाहै हुँदैन ।
तत्कालिन एकीकृत नेकपा (माओवादी) को विराटनगर अधिवेशनपछि रुपान्तरण सम्भव छैन भन्ने लाग्यो । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले पैसा र जाँडापानीको खोलो बगाउँथे । होटलहरु ‘रिजर्व गरिएको हुन्थ्यो । मैले प्रचण्डलाई यो के हो ? भनें . ‘चुनाव भनेको त्यही त हो’ भनेका थिए . चुनावको सबै पाटापक्ष हेर्दा बुझ्न सकिन्थ्यो–कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने निर्णय चुनाव अगाडि नै भइसकेको हुँदो रहेछ । कतार, बेलारुस, एनसेल, भाटभटेनी सबैतिर प्रचण्डको लगानी भएको चर्चा अर्थपूर्ण छ । प्रचण्ड निवासकै विषयमा आशंका गरिन्छ । लेखराज भट्टकी श्रीमती मालिका भगवती मन्दिर धाउने, सिता दाहाल व्रिmश्चियन, महरा पादरीको आशिर्वाद लिन जाने, मोहनचन्द्र अधिकारी गिता पाठ गर्ने यो के भएको हो ? आदतको सत्ताका विरुद्ध आजैदेखि संघर्ष आवश्यक छ । माओले त्यसलाई निरन्तर क्रान्ति भन्नुभएको थियो ।
प्रचण्डहरु काल्पनिक पुलाउ खाएर, खुवाएर बसेका छन् । तीन पटक आफ्नै नेत्रृत्वमा सरकार बनाउँदा समेत जनयुद्ध कालमा किनबेच भएका जग्गाको समस्या समाधान गर्न नसक्नेलाई समाजवाद कसले पोल्टामा थमाउन आउँछ । रुपान्तरण हुने होइन कि विषय उठान गर्नेहरुलाई निषेध गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने गरिन्छ । अमिक शेरचन आयोगले जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), वर्षमान पुन (अनन्त), गिरिराजमणी पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, लेखराज भट्टलाई भ्रष्टाचार गरेको प्रभावसहित कारवाही सिफारिस गरेको छ । त्यसैले सो प्रतिवेदन लुकाइएको छ र अमिक शेरचनलाई केन्द्रीय समितिबाटै हटाएर दण्डित गरिएको छ । अमिक शेरचनलाई ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरीु भनेझैँ गरियो । हामीले वैचारिक बहस उठाउनासाथ प्रतिसोध साँध्न थालियो . त्यसपछि हामीले विद्रोह गरेर ! ७ पुसमा पार्टी बनायौं .
हाम्रो एकतालाई रोक्न प्रचण्ड र वैद्य दुवैतिरबाट अधिकतम् प्रयास भएको थियो . हामीले त्यसप्रकारका एकता विरोधी हर्कतहरुलाई पराजित गरेका छौं ।
आज पुँजीवाद एकीकृत भएर आएको छ । एउटा मोबाइलमा रेडियो, अडियो, कम्प्युटर, टेलीभिजन, मेमोरी सबै एउटै भएर आएको छ . प्रविधिसमेत एउटै भएर आएको छ . हकिंग्सले कोपर्निकसदेखी आइन्सटाइन हुँदै क्वान्टम सिद्धान्तलाई एकीकृत सिद्धान्तमा विकास गरेका छन् । उनले दार्शनिकहरु कता गए ? नयाँ सिद्धान्तको विकास गरेका छन् । उनले दार्शनिकहरु कता गए ? नयाँ सिद्धान्तको विकास किन भएन ? प्रश्न उठाएका छन् । उनले भौतिक विज्ञानलाई समाज विज्ञानमा बदल्न नसक्दा, एकीकृत गर्न नसक्दा ज्ञान खण्डित भयो भनेका छन् । हामीले भौतिक विज्ञानमा आएको ज्ञान चेतनालाई समाज विज्ञानमा लागू गर्ने प्रयास गरेका छौं । त्यसलाई हामीले कार्यदिशामा मूर्त गरेका छौं ।
अर्थ राजनीति मूल विषय हो । हामीले समाजको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको चरित्र र दिशा बुझ्नुपर्छ । अल्छी गर्नु हुँदैन । निरन्तर अनुसन्धान भइरहनु पर्छ । बेलायत अल्छी भएर, मेहनत र अनुसन्धान गर्न छोडेर बिग्रेको हो भन्छन् । चीनमा अहिले पनि ग्वाङ्झाउको एकजना पार्टी सदस्य र बेइजिङको राजनैतिक समिति (पिबिएम) ले बोल्ने भाषा र बुझाई एउटै देखिन्छ । त्यसैले कार्यदिशाप्रति एकै प्रकारको बुझाइ चाहिन्छ । हतियारको आलोचनालाई आलोचनाको हतियारले पराजित गर्न सकिन्न । तर विचारको शक्ति जनताको मनमा प्रतिष्ठापित भएपछि त्यो भौतिक शक्तिमा बदलिन्छ । पार्टी संगठन मात्र होइन, हामी विचारिक रुपमा पनि संगठित हुनुपर्छ ।
थप राष्ट्रघात नहोस
नेकपा (बहुमत) को नवौँ महाधिवेशन फागुन १ गतेदेखि
प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना र आयल निगम घेराउदेखि चक्काजामसम्म सशक्त आन्दोलन
संसदीय संशोधनवादविरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष गरौँ
विप्लव समूहलाई भद्दा मजाक नगर्न र न्यूनतम् राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गर्न अखिल (क्रान्तिकारी) को सुझाव
बुद्धिजीवी नेता थापाप्रति नेकपा (बहुमत) द्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त
वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दावाद ! नवौँ महाधिवेशन जिन्दावाद !
कैलालीमा पनि बढारियो विप्लव समूह, सम्पूर्ण पार्टी नेता र जवस नेकपा (बहुमत) तिर
चर्को मूल्य वृद्धि र महँगीविरुद्ध नेकपा (बहुमत) द्वारा काभ्रेको बनेपामा प्रदर्शन
नेकपा (बहुमत) भोलि २१ औँ इच्छुक स्मृति तथा सांस्कृतिक बलिदान दिवस मनाउँदै
अखिल क्रान्तिकारीद्वारा यौनहिंसा गर्ने कलेज सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न चेतावनी
नेकपा (बहुमत) ले पोखरामा गर्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध प्रदर्शन
विभिन्न पार्टी परित्याग गरी दर्जनौँ नेता–कार्यकर्ता नेकपा (बहुमत) मा समाहित
नेकपा (बहुमत) उदयपुरको संयोजकमा जटिल
जनवादी केन्द्रीयतासम्बन्धी मालेमावादी दृष्टिकोण